Kukhona eRussia, emzini Krasnoyarsk, a Biathlon Academy okukhulu, elise yezindawo olunothile kakhulu emzini - ku Mykolaiv egqumeni. Esakhiwe eziyinkimbinkimbi izinkuni impahla, sizungezwe ihlathi elihle, sise unyawo yegquma. Kule ndaba, umbono wukuthi le ndawo itholakala kude nedolobha. Nakuba endleleni eya edolobheni kuthatha imizuzu engu-15 kuphela.
Biathlon Academy (Krasnoyarsk) izithombe, incazelo
Kutholwe kuyinto ibhizinisi abaziwa emgwaqweni okuthiwa Biathlon. Inhlangano lihlotshaniswa ezemidlalo isigaba "Isigaba".
Kulesi eziyinkimbinkimbi kuhlanganisa isakhiwo main nge ngokufanele therein ukuzivocavoca: ithenisi, volleyball, ejimini, amakamelo sokufaneleka nokudansa. On the indawo kukhona 2 amathilomu, ehhotela, ukwakha hardware, imoto platform (nge 90 zokupaka yokupaka), ski-roller ithrekhi kanye ebaleni lokudlala ongaphandle. Kukhona futhi wanikeza isimiso ramps.
Biathlon Academy (Krasnoyarsk) uhlukile khona Tir, okuyinto enemisebenzi, multi-purpose isikhala zasendlini kanye ephephile amancane umphakathi yezemidlalo luhlobo. Kungenzeka ukubhekana ukudutshulwa izinhlobo ezimbili izikhali: emoyeni, esincane.
Kuhloswe ukuthi uhla sokudubula for ukuqeqeshwa umsubathi abathandi ukuqeqeshwa sessions, futhi siqukethe obuthathu umlilo (10 m, 25 m no-50 m) kanye ezine izinhlobo okuhloswe. Lokhu ezingeni imishini (German) Yaqala ke e Krasnoyarsk.
Umlando we the best Biathlon maphakathi nezwe
Boundary (Krasnoyarsk), isikhungo ezizimele zomphakathi yezemidlalo kuyinto Biathlon Academy.
Krasnoyarsk linomlando othakazelisayo ngokuya ukuthuthukiswa Biathlon esifundazweni.
Ngo-September 2006, kwanqunywa ukuba ukudala isiqu solwazi Biathlon. Ngo-2007 waqala ukudala iphrojekthi, futhi ngo-2011, ngo-December, ivule kakade Academy, eyagcina eyinkimbinkimbi engcono eRussia.
Ngokuvamile, Biathlon esifundazweni waqala ukukhula kwawo ngo-1957 Ngaleso sikhathi, isikhulu abasha Wezangaphakathi Ministry B. M. Ivanov waqala kahle amasu namacebo emncintiswaneni ne ukudubula isibhamu empini ibanga 20-ikhilomitha.
Ngo-1959, lapho wayiswa ibutho labaqaphi, wadala amaqembu ezemidlalo kanye negama "Dynamo". Bese ukusekela nokufunda kulezi abasubathi enikeziwe kwamasosha umkhuzi wawo, uColonel Mashkin e marksmanship - IG Zazulin kanye ski - VF Pereverzin.
Sam B. M. Ivanov - master lokuqala yezemidlalo ka Biathlon ku-Krasnoyarsk Territory, ngo-1965 lapho waklonyeliswa isihloko "Master ahlonishwe of Ezemidlalo", futhi eminyakeni 1959-1970 he was fike of the eziqine-izwe Biathlon abasubathi.
1964 kwaphawulwa Krasnoyarsk RSFSR Championship yamahhashi skiing kanye Biathlon, futhi kwathi kungakapheli nonyaka yayisiqhutshiwe ngokokuqala ngqá Biathlon edluliselwe.
Ngo nje eminyakeni embalwa ngaphambi ukubukeka onjalo sokuqeqeshwa emangalisayo njengoba Biathlon Academy (Krasnoyarsk), izinyathelo kuqala Kuye kwenziwa. Lokhu kwenzeka ngo-2006, ngemva abasubathi we Krasnoyarsk Territory babuya nemiphumela emihle kusukela iMidlalo Yama-Olympic eTurin, owawungumnyaka izikhathi ezintathu zilandelana ngenxa abasubathi Russian.
Sebenza ukulungiswa abasubathi
Sekukonke, iqembu izisebenzi coaching we Academy 15 abeluleki, abanye babo Umqeqeshi esasiwafanele we Russian Federation: VA Medvedtsev AA Gerbulov.
Kube njalo esebenza futhi ukulungiselela abasha coaching abasebenzi. abasubathi abaningi abadumile, yaphela umsebenzi wakhe e-ezemidlalo, abaqeqeshi ukuza emsebenzini. Ngokwesibonelo, manje abasubathi yangaphambili ukusebenza esikhungweni sokuqeqesha: Lubnin P., C. kanye V Shcherbakov hillocks.
Academy ekhethekile futhi eyingqayizivele futhi iqiniso ukuthi kukhona umnyango wakhe kubagijimi abanokukhubazeka.
Minyaka yonke, ngesisekelo imincintiswano ye Russian Championship nezinye imincintiswano ehlukahlukene Russian.
Biathlon Academy (Krasnoyarsk) ilungiselela amalungu 59 nezisebenzi we Krasnoyarsk Territory, 11 zazo ziqukethe Russian Biathlon eqenjini lesizwe.
-Isekelwe kahle by isimo eliphezulu Russian Biathlon maphakathi abawinile-Olympic e Vancouver - Krasnoyarsk Evgeny Ustyugov futhi Olga Medvedtseva.
Eminyakeni naso sonke isikhathi ukhona lokhu ayehlala kuwo lapho ekuleso Academy Ayekulungele: Yomsebenzi eyodwa Ezigcwalisiwe wezeMidlalo, amakhosi amathathu ezemidlalo eRussia futhi mayelana 23 amakhosi ezemidlalo.
Ngakho, indlela babo bomsebenzi ukufeza umgomo oyinhloko kuqinisekisa Biathlon Academy (Krasnoyarsk). Uphenyo bonke abake bavakashela noma bafundelwa luhlobo ukuqeqeshwa, ephelele kokubili ngokoMthetho kuceceshwa nekucashwa, futhi ngokuya amasevisi anikezwa izivakashi nabafundi kulo.
abasubathi Abaningi abaphulukiswa ukuqeqesha e Biathlon Academy iwine emhlabeni wonke nokuqashelwa. Olympic, abawinile of the World Cup, Umhlaba kanye Championships European.
Akukholeki ngalinye kulawa abasubathi abahlanu zihola ngaphezu kwesigidi amakhilogremu ngesonto
Isofthiwe Thwebula I-anna Symbian
15 izimoto enhle kakhulu emlandweni
Izibongo ezingavamile - ingabe okuhle noma okubi? I izibongo eziyivelakancane eRussia futhi emhlabeni
Inkampani yokukhiqiza "inxusa" omatilasi. Izibuyekezo ikhasimende
Indlela ukulungiselela isaladi "ngesiGreki"? izimfihlo ukupheka Simple
Basic amagugu kazwelonke. Kumiswa eziyisisekelo amagugu kazwelonke